कुन बिज्ञानको बारेमा सोध्दै हुनुहुन्छ?
27750 पटक पढिएको
सबैले सोध्न थाले किन बिज्ञान का बारेमा लेख्दैनौ ?
ए!! त्यो मैले पढेको बिषय ?
त्यो त अरुले पत्ता लगाएका र लेखेका कुराहरु पो हुन त ।मैले पढेको मात्र हो, कहाँ गहिरो सोच र विचार बिना बिज्ञान जानिन्छ र ?
म सङ्ग बिज्ञान भएपो लेख्नु ।म त रित्तो छु, दुनियाँका दिग्भ्रमित बिचारहरुले मेरो दिमाग भरिएको छ। फेरी रित्तो भन्ने अनि भरिएको भन्ने यो के हो? सोध्नु होला, हो! यही हो बिज्ञान को कमी ।
वास्तविक बिज्ञान विचार र ज्ञान बिना सम्भबै छैन । हामी पनि चरा जस्तै उड्न पाए हुन्थ्यो भन्ने बिचार नआएको भए प्लेन बन्ने थिएन, पानीमा काठको मुडो तैरिएको देखेपछी हामी पनि तैरन सक्छौ भन्ने बिचार नआएको भए पानीजहाज बन्ने थिएन, बिजुली चम्केको देखेर पानीमा कसरी बत्ती हुन्छ? भन्ने विचार नआएको भए बिजुलीको आबिस्कार हुने थिएन होला। स्याउ खसेको देखेपछी खुरुक्क नखाएर किन खस्यो ?भनेर न्युटनले विचार गरे र वास्तविक ज्ञान प्राप्त गरी बिज्ञान दिए गुरुत्वाकर्षणको, न्युटनले दिएको तथ्य ठिक छ कि छैन भनी आईन्स्टाइनले बिचार गरे र बस्तुको पिण्ड, लम्बाई र समय सापेक्ष छन भनी विचार गरे र सापेक्षताबादको सिद्दान्त प्रतिपादन गरे। एडिसन ले कसरी बिजुली बाट बत्ती बल्छ भनेर विचार गरे र त हामी लोडसेडिङ्ग खपेर पनि कहिलेकाहिँ बत्ती बाल्न सक्षम छौँ ।
अब भन्नुहोस, मैले के दिएँ ?
त्यसैले म त रित्तो छु । विचार गर्दै छु कि के नयाँ विचार गरुँ ?
फेरी विचार गर्ने विचार चाहिँ के हो?? त्यो अज्ञान हो। विचार गर्ने विचारले नयाँ विचार आउँदैन, जस्तै आज त जसरी नि कविता लेख्छु भनेर बस्नोस मरिकाटे आउँदैन कविता, आउँदै आउँदैन। लेख्यो अनि केर्यो,उही लेख्छन् केर्छन् भुपी सेर्चन भने जस्तो भैदिन्छ। कहिले काहिँ बाटोमा हिँड्दा हिँड्दै आउँछ कविता, पानीमा पौडँदा आउँछ कविता। कसैले प्रेममा परेपछी लेख्छन्, कहिले प्रेम छुटेपछी लेख्छन्। त्यसैले यो विचार पनि गर्छु भनेर योजना बनाईँदैन । उदाहरणको लागी यदी तपाइँले नयाँ विचारको सृजना गर्नको लागी योगा गर्ने योजना बनाउनु भयो भने तपाइँमा कुनै विचार आउँदैन । बरु योगा गर्ने बिचार गर्नुहोस्, र निरन्तर योगा गर्नुहोस् नयाँ नयाँ बिचार त्यसै आउँछ ।
अब कुरा आयो विचार गर्दैमा सबैकाम भइहाल्छ त?
त्यो चाहिँ ज्ञान हो। अब विचारबाट ज्ञान कसरी प्राप्त हुन्छ त? त्यसको लागी त चहिन्छ अन्तर्मनको यात्रा, अर्जुन दृष्ट्री, गहिरो सोच, ध्यान, तपस्याद्वारा कटिबद्ध रुपमा निरन्तर कर्म गर्नु, त्यसको बारेमा ज्ञान लिनु, त्यसको वास्तविक्ता जान्नु । ज्ञान प्राप्त भएपछी त्यसलाई प्रस्तुत गरिन्छ या भन्यौ परिक्षण गरिन्छ र त्यो हो “बिज्ञान्”।